Posted by Ko Hset Gyi on October 23, 2017
MIUI Forum Credit များအကြောင်း
Forum Credit ဆိုတာဘာလဲ?
Forum Credit ဆိုတာက အဓိက အသုံးပြုတာက MIUI Forum မှာပဲ အသုံးပြုလို့ရပါမယ်။ Forum Credit တွေဟာ MIUI Forum မှာ ကိုယ်ဟာ ဘယ်လောက်ထိ active ဖြစ်တယ်၊ ပူးပေါင်းပါဝင်တယ်ဆိုတာကို ပြသရာရောက်ပါတယ်။ MIUI Forum မှာ ရှိတဲ့ ပုံမှန် User တွေကို ဒီ Forum Credit တွေနဲ့ပဲ အဆင့်ခွဲထားပါတယ်။ Newbie Member > Junior Member > Senior Member > Gold Member >Diamond Member > Platinum Member >Elite Member > Supermeme Member အစရှိသဖြင့် ခွဲထားပီး Forum Credit များလေလေ ပုံမှန် user တွေ အတွက် အမြင့်ဆုံး Member ဖြစ်တဲ့ Super meme Member အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ Forum Credit တွေ များလေလေ Special Team က လူခေါ်တဲ့ အခါ ကိုယ်က လျှောက်ရင် ရနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးပိုများလေလေ ဖြစ်ပါတယ် ။Special Team member တွေခေါ်ရင် Forum Credit , online time , active ဖြစ်မဖြစ် တွေပေါ်အခြေခံပီး ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။
( Special Team ဆိုတာက MIUI Beta Team ,MIUI Device Team ,MIUI Designer Team , MIUI Resources Team အစရှိတာတွေအပြင်...........Moderator ,Super Moderator ) တို့ကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
Forum Credit ပမာဏကို ဘယ်လိုစစ်မလဲ?
မိမိရဲ့ Forum Credit ဟာ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို သိချင်ရင် ပထမဆုံး MIUI Forum ဖြစ်တဲ့ en.miui.com/forum.php ကို PC View (Desktop View) နဲ့ ဝင်လိုက်ပါ။ ညာဘက်ခြမ်းနား က ကိုယ့် Profile အောက်နားမှာ Forum Credit ဘယ်လောက်ပါ ဆိုပီး ပြပေးထားတာရှိပါတယ်။ အောက်ကပုံကို ကြည့်ပါ။
ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ profile ထဲကို တိုက်ရိုက် ဝင်စစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
MIUI Forum App သုံးစစ်ရင် ပိုတောင်လွယ်သေး ။Forum app ကိုဖွင့် ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်က လူရုပ် လေးကို နှိပ်လိုက်ရင် အောက်ကပုံလို profile လေးကျလာပီ
MIUI Forum App ကို အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
MIUI Forum App Download Link
ကဲဒီလောက်ဆို ကိုယ့် Forum Credit ဘယ်လောက်ရှိလဲ ကြည့်တတ်ပီထင်ပါတယ်။
Forum Credit တွေနဲ့ user Group တွေ ဘယ်လိုခွဲလဲ ?
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ပုံမှန် user တွေ အတွက် Group 8 ခုရှိပါတယ် ။ Newbie Member > Junior Member > Senior Member > Gold Member >Diamond Member > Platinum Member >Elite Member > Supermeme Member စသဖြင့်ပါ။ ဟုတ်ပီ ..သူတို့ကို Forum Credit နဲ့ ဘယ်လိုခွဲသလဲ ဆိုတော့ အောက်ကပုံလေးကို ကြည့်ပေးပါ။
ဒါတွေက ဘယ် user Group မှာ ဘယ်လောက် Forum Credit ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
User Group တွေက အရေးရော ကြီးလား ? ..
ဟုတ်ကဲ့.. MIUI Forum ရဲ့ အချို့သော ပိုစ့်တွေ ၊ ပြိုင်ပွဲတွေ ၊ Lucky Draw ပြိုင်ပွဲ တွေကို ဝင်ကြည့်လို့မရ ဝင်ပြိုင်လို့ မရတာကြုံဖူးလား။ အဲ့ဒါ user Group နဲ့ permission လုပ်ထားပါတယ်။ ဥပမာ .. အနိမ့်ဆုံး Gold Member တွေပဲ ဖတ်လို့ ရမယ်ဆိုပီး ကန့်သတ်ထားရင် Newbie တို့၊ Junior တို့ ၊ Senior တို့ ဟာ ဝင်ဖတ်လို့ မရတော့ဘဲ Gold Member နဲ့ အထက် User Group ကလူတွေပဲ ဖတ်လို့ ရပါလိမ့်မယ်။ အခြားသော မတူညီတဲ့ permission တွေလည်းရှိပါတယ်။ ဘယ်သူကတော့ ဘယ်လောက် permission ရတယ်ဆိုတာသိရဖို့ အောက်ကလင့်ကနေ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
မှတ်ထားရမှာက ကိုယ်က ဘယ် User Group ကြီးထဲမှာ ရောက်နေတယ်ဆိုတာ အရေးမကြီးဘူးဆိုတာပါဘဲ။ MIUIers အချင်းချင်း အကူအညီ ပေးနိုင်တာကပဲ ပိုကောင်းပါတယ်။
Forum Credit တွေက ဘယ်နေရာမှာ သုံးလို့ရလဲ ၊ ဘယ်လို ရနိုင်လဲ ?
ဒါက အပေါ်မှာလည်းပြောပီးသားကိုပဲ ပြန်ကောက်ရပါလိမ့်မယ်။ User permission တွေ တိုးလာမယ်။ Special Team တွေကို လျှောက်ချင်ရင် ဉီးစားပေး ရမယ်ပေါ့လေ ။နောက်တစ်ခါ MIUI forum က တစ်ခုခု ကို ဒေါင်းချင်ရင် Forum Credit ထဲက 1 credit နှုတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်မှာ Forum Credit တွေများနေမှ ဒေါင်းစရာရှိတာတွေကို ဒေါင်းနိုင်ပါမယ်။ ဒါဆို Forum Credit ရဖို့က ခက်သလားဆို ရင် လွယ်မှ လွယ်ပဲ... MIUI Forum က post တစ်ခုခု မှာ reply တစ်ခါပြန်တိုင်း +1 credit ပေးပါတယ်။ မဆီမဆိုင်တွေ reply ပြန်တာ ၊ ပိုစ့်တိုင်းကို Thanks တို့ Great တို့ချည်း reply ပြန်တာဟာ Forum က အဘမ်းခံရနိုင်တယ်လို့ သတိပေးလိုပါတယ်။ ဆိုင်တာလေးတွေပဲ reply ပြန်ပေါ့.
နောက်ပီး MIUI Forum app ကို သုံးပီး reply ပြန်တာ , post တင်တာတွေဆို double ရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ MIUI Forum app အသုံးပြုပီး reply တစ်ခါပြန်ရင် +2 forum credit ပါ.နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုး Forum credit တွေရနိုင်သေးလဲဆိုတော့ MIUI Forum မှာ နေ့တိုင်းနီးပါးပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ Lucky draw မဲနှိုက်ပေးတဲ့ post တွေကနေ ရနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လို lucky draw တွေမှာ ပထမ ဆိုဘယ်လောက် ၊ ဒုတိယဆို ဘယ်လောက် အစရှိသဖြင့် ပြောပေးထားပီး မဲနှိုက်ရွေးချယ်တာမျိုးနဲ့ ပေးပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ဒီလို မျိုးပါ။
ဒါမျိုးကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပထမ ရတဲ့ သုံးယောက်ကို Forum Credit 500 စီ ၊ ဒုတိယ ငါးယောက်ကို Forum Credit 300 စီ ပေးပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်မှာလည်း တစ်ခါတည်း ရေးထားတတ်သလို အဲ့ post ကို ဝင်ဖတ်ကြည့်ရင်လည်း Prize ဆိုတာရဲ့ အောက်မှာ ပေးမယ့် ဆုကို တစ်ခါတည်း ရေးပေးထားပါတယ်။ နမူနာ အနေနဲ့ အောက်ကပုံလေးတွေကို ကြည့်ပါ။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် MIUI Forum Credit တွေအကြောင်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
MI Credit များ အကြောင်း
Mi Credit ဆိုတာဘာလဲ?
Mi Credit ဆိုတာကကျ တော့ Forum Credit နဲ့ လုံးဝ(လုံးဝ) မတူပါဘူး ။ Mi Credit ဆိုတာက Mi ရဲ့ ပိုက်ဆံတစ်မျိုးပါပဲ ။ Mi ကပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို Mi Credit နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ တော်တော်များများသိထားတာကတော့ အချို့သော အခပေး theme တွေ၊ Mi cloud ကို Storage ထပ်တိုး ချင်တဲ့ အခါတွေမှာ Mi Credit နဲ့ ပေးဝယ်ရတာပါ။ ဆိုတော့ Mi Credit နဲ့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ Forum Credit ဟာ လုံးဝလုံးဝ မတူဘဲ အသုံးပြုရတာကလည်း တစ်ခြားစီဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်မှာ Mi Credit ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဘယ်လိုစစ်မလဲ?
Mi Credit ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဆိုတာ စစ်ပုံစစ်နည်းက မိမိ အသုံးပြုနေတဲ့ Rom ပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်။Mi Credit app ဟာ China Rom အသုံးပြုသူတွေမှာ built in ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Global Rom အသုံးပြုသူတွေမှာ တော့ Mi credit function ကို ဖျောက်ထားတဲ့ အတွက် quick shortcut maker app လိုမျိုး နဲ့ ဖော်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ China Rom ပဲဖြစ်ပါစေ ၊ Global Rom ပဲဖြစ်ပါစေ ၊ PC ကနေပဲဖြစ်ပါစေ မိမိ Mi Credit ကို Browser ကနေလည်း ကြည့်လို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော် စစ်တဲ့နည်းကို China Rom , Global Rom , Browser စသဖြင့် ခွဲပီးရေးပေးသွားပါမယ်။ (ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Rom က China လား Global လား မသိသေးရင် အောက်ကလင့်မှာဖတ်ပါ။
China Rom အသုံးပြုသူတွေမှာ Mi Credit ဘယ်လိုစစ်မလဲ?
China Rom အသုံးပြုသူတွေက လွယ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး Setting > Mi Account > VIP Setting ဆိုတာ ကို သွားပါ။ အောက်ကအဆင့်ရောက်ရင် ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အဝါရောင် Mi ဆိုတဲ့ ပုံလေးကို ဝင်ပါ။
ဒါဆိုရင် နောက်တစ်ဆင့်မှာ ကိုယ့် မှာ Mi Credit ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဆိုတာပြပေးပါလိမ့်မယ်။ ခုလက်ရှိ ကျွန်တော့မှာ Mi Credit 50 ရှိတဲ့ အတွက် 50 Mi Credit လို့ပြနေပါတယ်။ ဘာမှမရှိရင်0လို့ပြပါလိမ့်မယ် :3
ကဲ ဒါဆို နောက်ကျ ရင်လည်း အဲ့လို တစ်ဆင်ချင်း ဝင်မနေရအောင် Home Screen ပေါ်ကို Mi Credit app လေး Shorcut ထုတ်ထားလိုက်ပါမယ်။ ညာဘက် အပေါ်ထောင့်က အစက်လေး သုံးစက် ပုံစံလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပီးရင် Place on home screen ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပါ။
ဒါဆိုရင် Home Screen ပေါ်မှာ Mi Credit app လေးရာက်လာပါလိမ့်မယ်။ နောက် စစ်ချင်ရင် အဲ့ mi credit app လေးကို ဖွင့်ပီး တစ်ခါတည်းစစ်ရုံပါပဲ။
ကဲ China Rom တွေမှာ Mi Credit ဘယ်လိုစစ်သလဲက ပီးပါပီ
Mi Credit တွေ ကိုယ့် အကောင့်ထဲ ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာ အောက်မှာဆက်ရေးပေးထားပါတယ်။
Global Rom အသုံးပြုသူတွေမှာ Mi Credit ဘယ်လိုစစ်မလဲ ?
Global Rom အသုံးပြုသူတွေမှာကတော့ Mi Credit function က ပါမလာတဲ့ အတွက် ဖော်ပေးရတာလေး ပိုလာပါမယ် ။ ကျန်တာတွေက အတူတူပါပဲ :3
ပထမဆုံး Quick Shortcut maker ဆိုတဲ့ app လေးကို အောက်က ဒေါင်းပါ။
Quick Shortcut Maker From Play Store
ပီးရင် Quick Shortcut maker app လေးကို ဖွင့် > Search ဆိုတဲ့ နေရာမှာ Mi Credit လို့ရိုက်လိုက် > ပေါ်လာတဲ့ အထဲကနေ Mi Credit ဆိုတာလေးကိုရှာလိုက်ပါ။ တွေ့ရင် ဘေးက မြား လေးကို နှိပ်ပါ။(ပုံတွင်ကြည့်)
ပီးရင် နောက်တစ်ဆင့် ကျလာတဲ့ အထဲက Mi Credit ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပီးရင် အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း ကွင်းခတ် ထားတာလေးကို နှိပ်ပါ။
ကဲ ဒါဆိုရင် China Rom တုန်းက ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း Mi Credit ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာလေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
Home Screen မှာ Shortcut လေးပေါ်နေအောင် ညာဘက် အပေါ်ထောင့်က အစက်သုံးစက် ပုံစံလေးကို နှိပ် ၊ Place On Home Screen ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် Home Screen မှာ Mi Credit App လေးရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ အသေးစိတ်ကို မဖော်ပြတော့ပါ။ "China Rom အသုံးပြုသူတွေမှာ Mi Credit ဘယ်လိုစစ်မလဲ " ဆိုတာရဲ့ အောက်မှာ ဖော်ပြပီးသားပါ။
MI Credit တွေကို Mi Credit app သုံးပီးကိုယ့် အကောင့်ထဲ ဘယ်လိုဖြည့်မလဲ?
ဒါကတော့ လွယ်ပါတယ် ။ အပေါ်က ပုံလိုမျိုး Mi Credit ဘယ်လောက်ရှိလဲ စစ်တဲ့ နေရာလေးမှာ Top up > ဆိုတာလေးပါ ပါတယ်။ အာ့လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
တကယ်လို့ ဘာနဲ့ ဖြည့်မှာလဲ ဆိုတာလေးမေးလာရင် Mi Credit ဆိုတာလေး ရွေးပေးလိုက်ပါ။ (မမေးရင် မရွေးနဲ့ပေါ့ဗျာ)
နောက်တစ်ဆင့် Code ဖြည့်ရမယ့် နေရာလေး ရောက်သွားပါလိမ့်မယ် ။ Mi Credit ရဲ့ Code ရိုက်လိုက်ပေါ့ဗျာ ။ ဖုန်းဘေ ဖြည့်ရသလိုပါပဲ :3
ဖြည့်ပီးရင် Top up ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ရုံပဲ Mi Credit တွေရောက်သွားပါပီ ။ (မှန်လည်းမှန် ၊ expire လည်း မဖြစ်သေးရင်ပေါ့လေ :3)
Mi Credit ကဒ် လက်ဝယ်ရှိရင် Code တွေကို မရိုက်ဘဲ Code ရိုက်ရမယ့် အကွက်ဘေးက Camera ပုံလေးကို နှိပ် > Code တွေကို ချိန် ပေးလိုက်ရင် လည်း ရပါတယ်။
ကဲ ဒါဆို Mi Credit တွေ ရောက်လာလား ကိုယ့် Mi Credit ဘယ်လောက်ရှိလဲ ပြန်စစ်ကြည့်ပေါ့ ။
Browser အသုံးပြုပီး Mi Credit စစ်မယ် ၊ ဖြည့်မယ်?
ဒီနည်း ကတော့ China Rom တွေ Global Rom တွေ ရွေးနေမှာမဟုတ်ဘူး ။ Browser မှာဆိုတော့ Mobile View နဲ့ ဆိုတစ်မျိုး ၊ Desktop View နဲ့ ဆိုတစ်မျိုး နှစ်မျိုးရှိမယ်။ ပထမဆုံး Mobile View နဲ့ အရင်ပြောပါ့မယ်။
Mobile View Mi Credit နဲ့ စစ်မယ် ဖြည့်မယ်
https://mibi.mi.com ကို သွားပါ။ ပေါ်လာတဲ့ အထဲက အစိမ်းလေးကိုနှိပ်ပါ။ (အဓိပ္ပါယ်သိချင်ရင် ကွကိုယ် Google Translate သုံးပါ။)
ပီးရင် Mi account Sign In ဝင်တဲ့ page ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ Mi Account ဝင်လိုက်ပေါ့ဗျာ။
ပီးရင် နောက်တစ်ဆင့်မှာ အောက်ကပုံလိုလေးတွေ့ရပါမယ်။ ထင်တာကို ဘာသာရမ်းပြန်ထားပါတယ်။ အပေါ်နားလေးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Mi Credit ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ဆိုတာ ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ ကဲ ဒါဆို Mi Credit ဘယ်လောက်ရှိသလဲ သိရပါပီ။ Mi Credit တွေ ဖြည့်မယ် ဆိုသူတွေက မြား ထိုးထားတဲ့ အစိမ်းလေးကို ထပ်နှိပ်ပေးပါ။
Mi Credit ကိုဖြည့်သွင်းမှာ ဖြစ်တာကြောင့် Mi Credit ပုံလေးနဲ့ ကွင်းခတ်ထားတာလေးရွေးပါ။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ Mi credit code ဖြည့်ရမယ့်နေရာရောက်ပါပီ။ ထုံးစံအတိုင်း Code ဖြည့် ပီးရင် အစိမ်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုဖြည့်ပီးပါပီ။ Mi Credit ရောက်မရောက်ကို Mi Credit စစ်တဲ့ နေရာကို ပြန်စစ်ကြည့်ပါ။
Desktop View နဲ့ Mi Credit စစ်မယ် ၊ ဖြည့်မယ်
Will Be Update Later ( ရေးရမှာ ပျင်းလို့)
Facebook Group Member တွေကတော့ Desktop View နဲ့ ဟာကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
For Special Facebook Group Member Link
Mi Credit ကဘယ်နေရာတွေမှာ သုံးလို့ရလဲ ?
အပေါ်မှာ ပြောထားခဲ့တဲ့ အတိုင်း Mi Cloud Storage ထပ်တိုး ဝယ်၊ယူချင်တာတွေ ၊ အခပေး Theme တွေ ၊ Font တွေ အပြင် ၊ လူသိနည်းတဲ့ Xiaomi Store က အခပေး Game တွေ ၊ Duokan လို့ ခေါ်တဲ့ Xiaomi ရဲ့ ebook စာအုပ်တွေ ၊ Xunlei လို့ ခေါတဲ့ Download Engine ၊ သီချင်း တွေ ၊ Video တွေ အစရှိသဖြင့် Mi Credit တွေနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အသုံးအများဆုံးကတော့ Cloud Storage ကို Storage Space တိုးချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ paid theme တွေကို ဝယ်တဲ့ နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အောက်က ပုံက Mi Credit အသုံးပြုပီး ဝယ်လို့ ရနိုင်တာတွေပါ။
အခပေး Theme တွေ ဝယ်ယူတဲ့ နေရာမှာ
Cloud Storage တိုးချင်တဲ့ နေရာမှာ
Mi Credit တွေ ဘယ်လို ရနိုင်မလဲ ?
ဝယ်ပါ :3 Mi Credit တွေကို အချို့သော ဖုန်းဆိုင်တွေမှာ ရောင်းပါတယ် ။ ဈေးနှုန်းက 10 Mi Credit ကို ငါးထောင်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။
အလကား မရနိုင်ဘူးလား ? ဆိုရင်တော့ ရနိုင်ပါတယ် ။ Forum Credit တွေလိုပဲ MIUI Forum မှာ အခါအားလျော်စွာ ကျင်းပတဲ့ Lucky Draw ပြိုင်ပွဲတွေမှာ Mi Credit ဘယ်လောက် ဘာညာ ဆိုပီး ပေးပါတယ်။ Lucky ဖြစ်အောင်တော့ ဆုတောင်းပေါ့။
Reply ပြန်ရုံနဲ့ မရဘူးလား ? မရပါဘူးခင်ဗျာ ။Forum Credit တွေပဲ တိုးပါလိမ့်မယ် ။ Mi Credit ကတော့ မရပါဘူး ။ သူများ လက်ဆောင်ပေးတာ (သို့) သူများ မဖြည့်ရသေးတဲ့ Code နံပါတ်လေး ရရင်တော့ ရပါလိမ့်မယ်။
Mi Credit ကို အကောင့်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု လွှဲလို့ရလား?
မရပါဘူးခင်ဗျာ ။ Mi Credit ရဲ့ Policy မှာကို အဲ့လိုလုပ်ခွင့် မပေးထားပါဘူး ။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် Forum Credit တွေ Mi Credit တွေ ၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာတွေ ၊ ဘယ်လိုရနိုင်တယ် ဆိုတာတွေ သိရှိသွားလိမ့်လို့ ယူဆပါတယ် ။ အကယ်၍ Forum Credit , MI Credit နဲ့ ပတ်သက်ပီး Up to date များကို လည်း ဒီပိုစ့် ကို update လုပ်သွားပါမယ်။
ရေးထားတဲ့ မပါသေးတဲ့ သိလိုတဲ့ အချက်များကို လည်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်။ ရေးထားတဲ့ အထဲမှာ ပါပီးသား တွေကို ကိုယ့်ဘာသာစာဖတ်ပျင်းပီး လာမေးနေရင် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ နဲ့ မျက်နှာလွှဲ ခဲပစ် ပြုလုပ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလိုပါတယ်။
ဒီပိုစ့်လေး ရေးဖို့ လိုအပ်တဲ့ Knowledge တွေကို အစောကြီး Share ပေးထားတဲ့ ကိုတောင်ပေါ်သား ၊ ကိုကျော်စိုးဝင်း တို့ကို လည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
Download Link >…